Shina matihanina mando sy maina fototra mampifangaro endrika spaonjy endrika telo tarehy mpanamboatra sy mpamatsy | Dongmei
Fototra mando sy maina matihanina mifangaro spaonjy tarehy telo tarehy
● LUXURY: vita amin'ny sombin-javatra Superior, Super Soft, Non-Latina. Ity dia manome bouncing lehibe kokoa hanome anao izany endrika tsy misy pentina izany. Manamora sy haingana kokoa koa ny manisy makiazy. Maimaimpoana tanteraka ary tsy misy habibiana.
● FITIAVANA & FAHASALAMANA: Ny farany boribory dia tsara amin'ny fifangaroana faritra midadasika, raha ny tendrony kosa dia manome mazava tsara mba hahatonga azy ireo spaonjy makiazy maro sosona. Ireo sponjy ireo dia mihabe sy mihalehibe kokoa rehefa lena. Izy ireo dia azo ampiasaina amin'ny karazana makiazy isan-karazany mba hahitana fototra, crème BB, vovoka, fanafenana, fitokanana, ranoka, sns.
● FANAFOTANA TSY MISY: Noho ny fahalemeny sy ny malama ny sponjy ataontsika dia tsy mandoto makiazy be loatra izy ireo. Midika izany fa very fotsiny ny vokatrao. Ny koa dia tsy manelingelina ny hoditra toy ny spaonjy na borosy mafy orina. Ho tian'ny hoditrao ianao noho izany.
● MORA DALOHA: savony sy rano mafana no ilainao.
Dongshen dia natokana hamoronana vokatra makiazy lafo vidy ambony indrindra amin'ny vidiny mirary.
Fampiasana maina: fampiasana lena ho an'ny fampiharana vokatra vita amin'ny ronono na fanosotra, fototra, menaka BB, fanosotra, fanafenana. Mampiasà lamba famaohana taratasy hamoahana ny rano be loatra mandra-pitetezan'ny rano. Afangaro moramora mba hampihenana ny fako tsy ilaina.
Fampiasana lena: mandena kely ny spaonjy, avy eo ametaho shampooing kely kely amin'ny faritra maloto (azo ampiasaina koa ny detergent na savony matihanina). Manotra moramora ary tsindrio ilay spaonjy mba hipoipoitra. Mandrosoa hatrany ary potsero haingana mandra-pahatongan'ny tasy sy sombina. Mampiasà servieta na lamba famaohana madio mba hanesorana moramora ny rano be loatra, ary ho maina ny rivotra.
1.Mampiasa rano mafana mando ny spaonjy ary asio savony kely amin'ireo faritra voaloto.
2. Manosaha moramora ary tsindrio ilay spaonjy mba hipoipoitra.
3. Tohizo ny manasa sy mametaka haingana mandra-pahatongan'ny tasy sy sud hita intsony.
4. Esory moramora miaraka amin'ny servieta na lamba famaohana ny hamandoana be loatra ary avelao ho maina izy.
Teo aloha: Dongshen borosy vita amin'ny hazo vita amin'ny hazo avo lenta fotsy
Manaraka: Professional Foundation Blending Makeup Sponge ho an'ny maina na lena ampiasaina
Beauty Blender spaonjy
Sponjy borosy ambongadiny
Tsy misy latsa-bato Dongshen ary Vegan akeup Blender Bea ...
Professional Foundation fampifangaroana spaonjy makeup ...
Dongshen matihanina spaonjy spaonjy mitete endrika ...
Dongshen makeup sponjy blender ho an'ny crème vovoka ...
Dongshen ambongadiny makiazy spaonjy lafaoro ...
Makiazy tarehy telo-apricot an'ny apricot ...
Faritra fiharatra, Manaova borosy, Barber Shave, borosy makiazy napetraka, Mametraha makiazy borosy, Fitaovana borosy makiazy,